चहलपहल बढेसंगै संक्रमण बढ्ने खतरा झन् उच्च।यी कुरामा ध्यान दिनुहोस,हजारौको भीडमा पनि कोरोनाले छुन्न – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Health/चहलपहल बढेसंगै संक्रमण बढ्ने खतरा झन् उच्च।यी कुरामा ध्यान दिनुहोस,हजारौको भीडमा पनि कोरोनाले छुन्न
१. भिडभाडमा रहेक संक्रमित ब्यक्तिको खोकी, हाच्छुयु तथा थुकको छिटाबाट पनि कोरोना सर्न सक्ने भएकाले यसबाट बच्नु पर्दछ ।२. संक्रमित ब्यक्तिको छुवाईबाट पनि कारोना सर्ने भएकाले समयमा सर्तक हुनु पर्दछ ।३. सकेसम्म धेरै मानिस जम्मा भएको स्थलतर्फ नजाने ।४. कोहि बिरामी शंकास्पद लागेमा उसको सीधा सम्पर्कमा नजाने ।
५. प्लास्टिक र स्टीलमा ९ दिनसम्म यो भाइरस जीवित रहने भएकाले यस्ता वस्तुको प्रयोग सकेसम्म नगर्ने ।६. ढोकाको ह्याण्डलबाट पनि कोरोना भाइरस सर्ने भएकाले सचेत भएर मात्र ढोका खोल्ने ।७. कम्प्युटर चलाउँदा अरुले चलाउने गरेको भए कम्प्युटरको किबोर्ड नछुने ।८. कुनै पनि फ्लू वा रोगको संक्रमित ब्यक्तिको घरमा नजाने ।९. बाहिरबाट आउनासाथ आफुले प्रयोग गरेको सबै सामाग्रीको सरसफाइ गरिरहने ।१०. कुनै पनि मानिससंग कुरा गर्दा १ मिटरभन्दा टाढाबाट मात्र कुरा गर्ने ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **